ကျနော်ရိုက်ပြီး ကြိုက်ခဲ့သောပုံများ အမှတ် တစ် ( ဓါတ်ပုံပိုစ်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ကျနော်ရိုက်ပြီး ကြိုက်ခဲ့သောပုံများ အမှတ် တစ် ( ဓါတ်ပုံပိုစ်)	12
ကျနော်ရိုက်ပြီး ကြိုက်ခဲ့သောပုံများ အမှတ် တစ် ( ဓါတ်ပုံပိုစ်)
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jul 4, 2015 in Photography | 12 comments
ကျနော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံများထဲမှာ ကျနော်ကိုယ်တိုင် နှစ်သက်တဲ့ပုံလေးတွေရှိပါတယ်။
ဟိုးအရင်ကတော့ ဆရာ့ ဆရာတွေရိုက်တဲ့ ပုံတွေကိုကျနော့် တို့ကြည့်ပြီး
မှတ်ရ သဘောကျ ခဲ့ ရပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်ရိုက်တော့ မယ်ဆိုချိန်မှာ အစကတော့ ကိုယ်ရိုက်ချင်သလိုရိုက်ရာကနေ
သူများဝေဖန်တာကိုနားထောင်ပြီး ကိုယ်မသိတာကို ကိုယ့်ထက်သိသူထံမှာ
မေးရ မြန်းရ တပြည့် ခံရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လည်း ပြည့် စုံလုံလောက်တဲ့ အနေအထား
တတ်ကျွမ်းတဲ့အနေအထား ကို ရောက်မလာသေးတာကတော့ အမှန်ပါဘဲ။
အခုထိလည်း သင်ယူနေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အတတ်ပညာတစ်ခုဆိုတာ သင်ယူ လေ လေ ပိုခက်ခဲလေ
လို့ ကျနော်စိတ်မှာ ခံယူလို့ ထားပါတယ်။
အခုပုံလေးတွေက ပြည့်စုံ ခြင်းတော့ မရှိသေးပါဘူး။
1 မင်းကွန်းပုထိုးတော်ကြီးရှေ့ဆင်နဲ့အလှူလှည့်လာတာ(ကိုစိန်သော့ Mလုလင် တို့နဲ့သွားတုန်းက)
3 အာရုဏ်တက် ချိန်
6 ပြာလွင်သော တိမ်များဖြင့် အလှဆင်ခြင်း
10 အရောင်စုံ ညနေခင်း
11 မျှဉ်းကွေးများ ဖြင့်အလှဆင်ခြင်း
မြစပဲရိုး says: . တော်တော်များများ ကို မှတ်မိပါတယ် ကပေါက်ကြီး။
” အဟောင်းအသစ် ဖြစ်တည်ခြင်း” ကတော့ မြင်လိုက်ရတာ ဆန်း တယ်။
.နွားလေး တွေ ခမျာ ပိန်ရှာတယ်။ သူတို့ သခင် တွေ တောင် ဝ အောင် မစားရမှတော့။
အဟောင်းအသစ်ဖြစ်တည်ခြင်းက စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးက ဆွမ်းဦးပုညရှင် ဘုရားအရှေ့ဘက်က
နောက်တစ်ပုံရှိပါသေးတယ် အဲဒီပုံက တင်ဘူးတယ်။
သစ်ကိုင်းအကွေးကြားကနေ အောက်က စေတီလေးကိုရိုက်ထားတာ။
နွားလေးတွေက ရှမ်းလေးကျွန်းမှာ ။
မြန်မာနွားတွေက အများအားဖြင့် ဒီလို ခပ်ပိန်ပိန်လေးတွေပါဘဲ။.
သခင်မ၀ တာကတော့ မပြောပါနဲ့တော့။
ရာသီဥတု နှိပ်စက်တာ တစ်မျုိး။
Alinsett @ Maung Thura says: နံပါတ် ၁၀ လို ပုံမျိုး အပြင်မှာ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးဘူး။
ကျနော်ပဲ အပြင် သေချာ မရောက် မပေါက် မသိ မမြင်နိုင်လို့များလား
နံပါတ် 10 နဲ့ 11 ကချောင်းသာမှာ မထင်မှတ်ဘဲရခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေပါ။
ဒီပုံလေးတွေအားလုံး က ကင်နွန် A2200 ကင်မရာအသေးနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေပါ
Light room ဆော့ဖ်ဝဲထဲမှာထည့်ပြီး နံမယ်ထိုးတယ် အလင်းအမှောင်ချိန်တယ်
အပြင်လောက မှာလည်း ဒီလိုတိမ်မျုိးတွေ့ချင်ရင် ပင်လယ်ပြင်နဲ့ နီးတဲ့နေရာကိုသွားရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Alinsett @ Maung Thura says: ကျနော် ရခိုင်ပြည်ထဲက ပင်လယ်ပြင်တဆက်တည်း
ငါးနှစ်လောက် နေခဲ့/တံငါ လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အဲ့ဒီကျွန်းကလေးဟာ. . .
ငပလီကမ်းခြေနဲ့ ဘာမှ မကွာရေးချမကွာတဲ့
ပင်လယ်ပြင်ကြီးရဲ့ တဖက်. . .
.တောင်ဘက်အရပ်ဆီမှာ . . .
အခု မြင်ရတဲ့ပုံစံ အရောင်တော့ မမြင်ရေးချ
မမြင်ဖူးခဲ့. . .
အခု လေးပေါက် ပြလို့ မြင်ရပြီ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အဲ့နေက ပုံတွေက အရင်ချောင်းသာပိုစ်မှာလဲ တင်ဘူးတယ် သတိမထားမိလို့ဖြစ်မယ်
Mike says: .ကိုယ်တွေရိုက်ရင် ဘယ်တော့မှအဲ့လောက်မလှ…အားလုံးကြိုက်
ကံကောင်းလို့ ရထားတဲ့ပုံတွေလို့ ဘဲ ကျနော်က သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အမအေးရေ သိမ်းထားမယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါ
တောင်ပေါ်သား says: နံပတ် ၄ က မျက်စိထဲကို လင်းသွားတာပဲ ၊
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: 2012 အောက်တိုဘာလ အောင်ပန်းကို ရောက်တုန်းက ရိုက်ထားတာပါ
မြင်ကွင်းက တပြန့်တပြောကြီး အဲဘက်က ပုံတွေ ကျနော်ထက်အများကြီးလှအောင်ရိုက်ထားကြတာတွေ ရှိတယ်